Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Ny sidina avy any India mankany Canada dia mijanona ho lehibe
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Transport Canada dia manitatra ny Fampandrenesana ho an'ny Airmen (NOTAM) izay mametra ny sidina mivantana rehetra momba ny sidina sy ny mpandeha mivantana mankany Canada avy any India hatramin'ny 21 septambra 2021.
Manitatra ny famerana ny sidina mivantana avy any India ny Transport Canada.
Ny fampandehanan-draharaha fotsiny, ny famindrana fitsaboana na ny sidina miaramila dia tsy tafiditra ao.
Ireo mpandeha miala an'i India ho any Kanada amin'ny alàlan'ny làlana ankolaka dia takiana mba hahazoana fitsapana mialoha ny fiaingany COVID-19 avy amin'ny firenena fahatelo.
The Governemanta Kanadiana dia manao laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona rehetra any Canada amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fomba manaraka ny risika sy ny refy fanokafana indray ny sisin-tany. Ny fomba fiasa mifototra amin'i Canada amin'ny fanalefahana ny fepetra eo amin'ny sisintany dia ampahafantarina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso maharitra ny angon-drakitra misy sy porofo ara-tsiansa, ao anatin'izany ny tahan'ny vaksinin'ny Kanadiana sy ny fanatsarana ny toe-javatra iainantsika.
Miorina amin'ny torohevitra farany momba ny fahasalamam-bahoaka avy any amin'ny Public Health Agency of Canada, ny Transport Canada dia manitatra ny filazana any amin'ny Airmen (NOTAM) izay mametra ny mpandeha mivantana ara-barotra sy tsy miankina. sidina mankany Kanada avy any India hatramin'ny 21 septambra 2021, amin'ny 23:59 EDT. Ny sidina mpandeha mivantana ara-barotra sy tsy miankina rehetra mankany Canada avy any India dia iharan'ny NOTAM. Ny fampandehanan-draharaha fotsiny, ny famindrana fitsaboana na ny sidina miaramila dia tsy tafiditra ao.
Transport Canada dia manitatra ihany koa ny takiana mifandraika amin'ny fitsapana molekiola COVID-19 tany amin'ny firenena fahatelo ho an'ny mpandeha mankany Canada avy any India amin'ny alàlan'ny làlana tsy mivantana iray. Midika izany fa ireo mpandeha izay miala an'i India mankany Canada amin'ny alàlan'ny làlana ankolaka iray dia hitohy hatrany ny fahazoana fitsapana mialoha ny fiaingany COVID-19 avy amin'ny firenena fahatelo - ankoatran'i India - alohan'ny hanohizany ny diany mankany Canada.
The Governemanta Kanadiana manohy manara-maso akaiky ny toe-javatra epidemiolojika, ary hiara-miasa akaiky amin'ny Governemanta India sy ny mpandraharaha ny seranam-piaramanidina mba hiantohana ny fomba tokony hapetraka mba hahafahana miverina amin'ny laoniny ny sidina mivantana raha vantany vao mamela izany.
Raha mbola mirona any amin'ny làlana tsara i Canada, ny toe-javatra epidemiolojika sy ny fandrakofana vaksiny dia tsy mitovy manerantany. Ny governemanta Canada dia manohy manoro hevitra ireo kanadiana mba hisorohana ny dia lavitra tsy ilaina any ivelan'i Kanada - ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia mampitombo ny loza mety hitranga amin'ny COVID-19 sy ny karazany hafa, ary koa ny fanaparitahana izany amin'ny hafa. Ny fepetra sisin-tany koa dia miova hatrany rehefa mivoatra ny toe-javatra epidemiolojika.